Hadda waxaad ka iibsan kartaa Nexus 9 bogga Amazon.com | Androidsis
[La cusbooneysiiyay] Hadda waxaad ka iibsan kartaa Nexus 9, hadda Google Play !!
Francisco Ruiz | | Nexus
Laga bilaabo maanta hadda waad iibsan kartaa HTC Nexus 9 y Google si toos ah dukaanka Amazon.com qiimo ahaan $ 399,99 qaabka leh 16 GB oo ah xusuusta kaydinta gudaha. Iibsashada qaar ee loo sameyn doono sidii sii-hayn tan ka hor ah maadaama badeecaddu aysan ka tagi doonin bakhaaradeeda saadka illaa bisha soo socota ee Nofeembar 3, 2014, toddobaadyo ka dib hadda.
Hadaad rabto 32 Qaabka xasuusta kaydinta waa inaad lambarka u kordhisaa 479 $, waana maalintaas cajiibka ah ee alaabtu ku jirto Google Nexus, marka lagu daro alaabada tiknoolajiyada wanaagsan, waxaa loo kala saari jiray tayadooda sare sicirka ugu adag ee aan ka heli karno adduunka qalabka Android.
Iibsiga Nexus 9 cusub waa la heli karaa, Marka hore dalalkoo dhan iyo iyadoo la raacayo badeecada caalamiga ah meel kasta oo dunida ka mid ah. Aniga qudhaydu waan iska shabbahay iibsiga oo waxaan awooday inaan gaaro talaabadii ugu dambeysay aniga oo aan la ii sheegin in aan laga heli karin aaggayga ama gobol ahaan. Caqli ahaan, maadaama aanan iibsan doonin Nexus 9, waan joojiyay jilitaanka kahor intaanan aqbalin talaabada ugu dambeysa, taas oo ah xaqiijinta cinwaanka rarka.
Taas ayaan kuu sheegayaa, laga bilaabo halkan illaa Nofeembar 3 taas oo ah goorta aaladaha loo habeeyay ay bilaabi doonaan inay ka baxaan bakhaarada Amazon ee ku wajahan meelaha ay aadayaan, waxaan aaminsanahay taas horeyba waxaa laga heli karaa spain dukaanka Amazon, Waxaan ula jeedaa Amazon.com.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha daneynaya inay ka iibsadaan Nexus 9 cusub HTC iyo Google oo aadan rabin inaad sugto illaa laga helayo Spain, ama adigu kaliya ma doonaysid in badeecadu dhammaato, taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha badanaa dhaca marka la soo saaro nooc kasta oo Nexus ah oo u dhigma milixdiisa, markaa waxaad isku dayi kartaa iibsashada amazon.com oo noo sheeg haddii ugu dambayntii aad awood u yeelatay inaad si guul leh ku dhammayso iyo in kale. Si tan loo sameeyo, xusuusnow, isla faallooyinka ku yaal boostadan, noo sheeg haddii aad si guul ah u dhammaystirtay iibsiga iyo in kale, iyo sidoo kale aagga juqraafi ahaan halka aad ku nooshahay.
Adigana?, Miyaad ka iibsan lahayd Nexus 9 cusub HTC iyo Google?
[La cusbooneysiiyay 17/10/14 19:00 saac.]
Hadda waxaan ku keydin karnaa seddex moodal oo laga heli karo dukaanka rasmiga ah ee Amazon Spain:
Habka ugu aasaasiga ah ee 16 Gb noo yimaado qiimo la hubo oo ah 399 Euros kharashka dhoofinta ayaa lagu daray:
Tusaalaha ah 32 Gb waxay ku soo baxdaa qiimo ah 489 yuuro oo la hubo iyo sidoo kale kharashka dhoofinta waxaa ka mid ah:
Ugu dambeyntii waxaan dooran karnaa qaabka 32Gb LTE qiimaha keydka ah oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta ee 569 euros:
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in la helo iibsiga tooska ah ee dukaanka barnaamijka ee Google, Dukaanka ciyaarta. Isla marka ay tani dhacdo waxaan cusbooneysiin doonnaa isla qoraalkan si aan si dhakhso leh kuugu soo wargelinno.
[Cusboonaysiin Cusub 17/10/14 at 21:5 PM]:
Nexus-ka cusub ayaa hadda lagu soo daray boos celintaada Google Play qiimo ahaan noqon doona 10 euro mid ka jaban qaab kasta, halkan xiriirka tooska ah ee keydka google.
16 Gb nooca ah 389 euro:
32 GB kaliya Wifi oo ah 479 euro:
32 Gb nooca LTE ee 559 euro:
Noocaan ugu dambeeyay ee LTE waxaa hadda loo calaamadeeyay inuu yahay lama heli karo maxaase jiri doona la heli doono dhawaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nexus » [La cusbooneysiiyay] Hadda waxaad ka iibsan kartaa Nexus 9, hadda Google Play !!
2 faallooyin, ka tag taada
Boos celinta waad sameyn kartaa ilaa ay ka rartaan lacag kama qaadaan. Oo waxaad haysataa wakhti aad ku joojiso.
Waxaan awood u yeeshay inaan sii qabsashadii si guul leh oo markii dambena waan baajiyay. Ka yimid Barcelona. Qiimuhu wuu kordhayaa, qaabkiisa aasaasiga ah, ka dib marka la isticmaalo dhammaan kharashyada, wadarta $ 523.89. Dhamaan waad salaaman tihiin.
Ku jawaab Nicolas
Sida loo xidido Bq Aquaris 5,7 "10 ilbidhiqsi
Cusbooneysii Nexus 5 ama Nexus 7 illaa 5.0 gacanta ah